Ahụigodo HyperX Alloy Core na òké Pulsefire, nyocha miri emi | Akụkọ Ngwa
Miguel Hernandez | 02/09/2021 13:34 | Emelitere ka 02/09/2021 13:40 | Ntugharị, General, Nyocha
Ngwa ndị akpọrọ Ịgba egwu Ha bụ ngwaahịa nke ndị na -etinye ogologo ụbọchị ọchị n'ihu onye nleba anya na -achọsi ike, yabụ, ezigbo òké na ahụigodo pụrụ iche bụ ihe dị mkpa iji nweta nsonaazụ dị mma n'ehihie anyị nke ọgụ dijitalụ. HyperX Ọ na -enye ndị na -egwu egwuregwu ọtụtụ ngwaahịa dị mma ruo ọtụtụ afọ, ndị a anyị na -enyocha taa bụ ihe abụọ dị mkpa na -agaghị efu na nhazi gị.
Anyị na -egosi gị keyboard Alloy Core na òké egwuregwu Pulsefire Core sitere na HyperX ka ị nwee ike jiri ngwa kacha mma gosi nka gị. Dị ka a ga -asị na nke ahụ ezughi, na mgbakwunye ị nwere ike nweta mpekere raffle a anyị na -emere gị n'efu, ị ga -atụfu ya?
Anyị erutela ndị debanyere aha 10.000 na YouTube n'oge na -adịbeghị anya, ebe ị nwere ike ịchọta nyocha na nkuzi kachasị mma, yabụ anyị ekpebiela isoro gị niile mee ya HyperX, ụlọ ọrụ ahụ chọrọ imekọ ihe site n'inye anyị ahụigodo Alloy Core na òké Pulsefire Core, abụọ n'ime ngwaahịa ya kacha mkpa maka nhazi dị mma, yabụ anyị na -ahapụrụ gị ebe a nyocha nke ngwaahịa ndị a, na karịa Anyị na -akpọ gị òkù isonye na raffle ahụ, anyị ga -ahapụrụ gị n'okpuru ọnọdụ isonye:
Ị chọrọ imeri keyboard na mkpọ mkpọ nke @HyperX? Soro na anyị #Iwu wee nweta òké egwuregwu Pulsefire Core na keyboard Alloy Core.
- Soro anyị?
- Ikwu: #HyperXActGadget# Dọọ # Egwuregwu #HyperX #Ngwahttps://t.co/UzTO2w2DGA
- Akụrụngwa Akụkọ (@agadget) September 2, 2021
1st soro HyperX na ActualidadGadget na Twitter
2nd denye aha na ọwa YouTube nke ActualidadGadget
3rd Nye RT ka ịbịaru tweet
Nkọwa nke anọ jiri hashtag #HyperXActGadget
5th Ị ga -emeri ntinye ọzọ ma ọ bụrụ na ị na -ekwu maka vidiyo a
Anyị na -eche ntuli aka nke mba, onye mmeri ga -enwerịrị ebe obibi na mpaghara mba (Spain). Anyị ga -enye onye mmeri ma na nkwupụta vidiyo YouTube yana site na akaụntụ Twitter anyị. A ga -ekwuputa onye meriri na eserese ahụ na RRSS na ọwa na 10/09/21 na elekere 12:00.
1 Ahụigodo HyperX Alloy Core
2 HyperX Pulsefire Core òké
Ahụigodo HyperX Alloy Core
Ahụigodo membrane a HyperX nwere ụfọdụ akụkụ 443,2 milimita obosara; 175,3 milimita dị omimi na 35,6 millimeters n'ịdị elu, anyị si otú a chọta keyboard zuru oke, ya bụ, n'etiti igodo 104 na 105 dị ka ụkpụrụ ahịa si dị. Banyere ibu, dị ntakịrị karịa otu kilogram iji dozie ya nke ọma na tebụl (ọkachasị gram 1.121).
Anyị na -ekwu maka keyboard nke nwere eriri a kpara akpa, nke nwere ogologo 1,8 mita, ezu iji "zoo" eriri ndị ahụ site na nhazi anyị wee mee ka ọ dị mfe dịka o kwere mee.
Banyere nkọwa teknụzụ, anyị na -echeta na ọ bụ keyboard membrane, ọ nwere njikọ USB 2.0 na ọsọ ntuli aka nke 1.000 Hz.O doro anya na ọ nwere sistemụ mgbochi ghosting nwere ọtụtụ igodo, n'aka nke ya, o nwere igodo raara onwe ya nye maka njikwa mgbasa ozi.
Anyị nwere "ọnọdụ egwuregwu" iji bulie atụmatụ ahụ elu, yana dịka igodo ọ bụla dị mma Ịgba egwu akpụkpọ ahụ, anyị na -eche ihu keyboard nke na -eguzogide mmiri ịwụfu mmiri. Anyị nwekwara usoro bọtịnụ ngwa ngwa nke na -enye anyị ohere ịhazigharị ihie, ụdị ọkụ na ọnọdụ egwuregwu, ihe anyị na -enwe ekele maka mgbe anyị na menus dị iche iche na -emekọrịta ihe maka ịchekwa oge.
Anyị nwere ike, ọ bụrụ na anyị chọrọ, kpọchie ahụigodo. Ọ nwere ogwe ọkụ nwere mmetụta atọ atọrọ atọ n'elu: Okirikiri agba, ebili mmiri dị iche iche, iku ume, siri ike, mpaghara ise, na aurora. A na -ebugharị ọkụ a niile na mpaghara igodo, nke na -enwu n'otu n'otu, mana ọ bụrụ na anyị masịrị, site na ngwanrọ anyị nwere ike mezie igodo ndị ahụ n'onwe ha. mpaghara ise nwere agba dị iche iche.
N'ịbụ keyboard keyboard, ọ na -enye nzaghachi dị mma na n'ezie ọpụrụiche pụtara ìhè site na ahụigodo igodo, eziokwu ahụ bụ na ọ dị oke nwayọ. N'otu aka ahụ, njem nke igodo ndị ahụ yiri nke ahụ igodo igwe ma nwee nzaghachi ngwa ngwa. Igodo a, na mgbakwunye na ndakọrịta Windows, Ọ dakọtara na PS4, PS5, Xbox Series X / S na Xbox One. Obi abụọ adịghị ya, nhọrọ ọzọ na -atọ ụtọ nke dị ihe dịka euro 50 na webụsaịtị gọọmentị nke HyperX na na ụzọ ọpụpụ.
HyperX Pulsefire Core òké
Oke dị mkpa ma ọ bụ karịa karịa ezigbo keyboard, yabụ ugbu a, anyị na -aga n'ihu inyocha ezigbo enyi, Pulsefire Core si HyperX. Anyị nwere akara ergonomic symmetrical nke nwere akụkụ nke 119,3 millimeters n'ogologo, site na 41,30 millimeters n'ịdị elu na 63,9 millimeters n'ịdị elu. Ibu ibu, ma ọ bụrụ na anyị agụghị eriri bụ 87 gram, na eriri ọ na -agbago gram 123, yabụ òké a pere mpe n'ime akụkụ ya.
USB, nkọwa dị mkpa, Ogologo ya dị 1,8 m, iji nwee ike nweta agagharị ma na -edozi ngwa ngwa na mkpa nke nhazi anyị. Igwe USB a bụ teknụzụ 2.0.
Gbanyụọ arụmọrụ na ihe mmetụta Pixart PAW3327 ya na mkpebi nke 6.200 dpi na usoro ihe atọrọ atọ nwere bọtịnụ dị n'elu nke 800/1600/2400 na 3200 dpi dabere na ụtọ onye ọrụ ọ bụla.. Ọsọ bụ 220 IPS na ngwangwa kacha bụ 30G. Ka anyị gbaa ngụkọta nke bọtịnụ 7, nke na -ekwe nkwa ogologo ndụ nke nde 20.
Ọkụ enweghị ike na -efu RGB LEDs nwere mpaghara ọkụ na ọkwa nchapụta anọ ka anyị nwee ike ịhazigharị ya dịka ọ masịrị anyị ma ọ bụ mkpa anyị. N'aka nke ya, o nwere a Ọnụ ọgụgụ ntuli aka 1000 Hz na usoro data nke 16 ibe n'ibe / axis. Dị ka ọ dị na keyboard gara aga, òké a dakọtara na PC, yana PS5, PS4, Xbox Series X / S na Xbox One, yabụ ndakọrịta ekwesịghị ịbụ okwu.
Anyị nwere usoro skate nke nnukwu nha yana nke nwekwara akụkụ ahụ n'ime igbe n'onwe ya. Dị ka keyboard, ngwanrọ nbudata n'efu HyperX NGenu Ọ ga -enye anyị ohere ime mgbanwe ọ bụla, ọkachasị na nhazi ọkụ. Igodo asaa ya nwekwara mmemme nke ọma. N'aka nke ya, òké ahụ nwere ọnụ ahịa dị oke ọnụ ahịa nke ga -anọ ihe dịka euro 35 na webụsaịtị gọọmentị HyperX na na ụlọ ahịa ndị ọzọ.
Ezigbo keyboard na ngwakọta ngwa maka ọtụtụ ndị egwuregwu na ọnụ ahịa dị oke ọnụ, Kedu ihe ị na -eche isonye na raffle anyị wee nweta mkpọchi keyboard na òké a kpamkpam? Atụfula ohere a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Keyboard HyperX Alloy Core na òké Pulsefire, ndị enyi egwuregwu zuru oke [SWEEPSTAKES]
Isonye na raffle
RoboVac X80 na HomeVac H30, nzọ ọhụụ ọhụrụ sitere na eufy